गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री वन्न लागेका कृष्णचन्द्र को हुन् ? – Palika Times
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री वन्न लागेका कृष्णचन्द्र को हुन् ?
२८ जेठ, काठमाडौं । गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठवन्धनले गृहकार्य सुरू गरेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हिजो प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो ।
दीपक मनाङे तपाईंहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘हुनुहुन्छ-हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ ।’
२००६ साल मंसिर १३ गते तनहुँमा जन्मेका पोखरेल २०२८ सालबाट कांग्रेस राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । थर पोखरेल भए पनि उनी नामपछाडि ‘नेपाली’ लेख्ने गर्छन् । उनी विभिन्न आन्दोलनमा ५-६ पटक जेल परेका छन् । उनले भारतको दरभंगाबाट मानविकी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक गरेका छन् । २०४८ सालपछि उनी लगातार चार कार्यकाल कांग्रेस नवलपरासीको सभापति भएका थिए । कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्य बने ।
२०७० सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा नवलपरासी क्षेत्र नं. ३ बाट चुनाव लडेका उनी २ सय २५ मतले हारेका थिए । २०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा एमाले-माओवादी गठवन्धनका उम्मेदवार सूर्यप्रसाद न्यौपानेलाई ३ सय ८२ मतल पराजित भई पोखरेल गण्डकी प्रदेशसभामा निर्वाचित बनेका थिए । नेपाल प्रेस वाट
थप ३७५० जनामा संक्रमण पुष्टि, ६७ जनाको मृत्यु
आजदेखि युरोकप शुरू (खेल समूह र तालिका सहित)